Wararka Maanta: Khamiis, July 16, 2020-Maareeyihii hay’adda Is-gaarsiinta Qaranka Soomaaliya oo is-casilay
Sida ku cad warqad kasoo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda is-gaarsiinta iyo teknoolajiyada Eng. Cabdi Canshuur Xasan waxaa hadda xilkaasi si KMG ah loogu magacaabay ku xigeenka maareeyaha hay’addaasi Cabdullaahi Shiikh Cabdicasiis.
Maareeyaha xilka ka tegay Cabdi Shiikh Axmed ayaa waxa uu qoray warqadda is-casilaadda ah ee uu shaqada uga tegay 14-kii, Luuliyo,2020-ka. Warqadiisa iscasilaadda ayuu ku sheegay Cabdi Sheikh in uu xilka isaga casilay, kadib kala aragti duwanaashiyo soo kala dhex-gashay isaga iyo wasiir Canshuur.
Hay’adda Is-gaarsiinta Qaranka ayaa waxay tahay waax muhiim oo la falgasha shirkadaha is-gaarsiinta.
Halkaan hoose ka aqrsio lixda (6) qodob ee uu cuskaday iscasilaadiisa: